महाप्रबन्धक राईको चमत्कारीक निर्णय – Complete Nepali News Portal
गत पुसदेखि कार्याभार समालेका महाप्रबन्धक राईले सांस्कृतिक संस्थान सुधारका लागि २२ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सी. एम. ट्रेडिङसँग भएको एकपक्षीय सम्झौतालाई पूनरावलोकन गरिने पनि उल्लेख गरेका थिए । ‘यसअघि संस्थानले आफ्नै पार्किङ क्षेत्र समेत प्रयोग गर्न पाएको थिएन । अव त्यो समस्या समाधान भएको छ । पार्किङ सुविधाका कारण अव हल अक्युपेन्सी पनि बढ्ने अपेक्षा गरका छौं’, महाप्रबन्धक राईले भने । लोकसंस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकासका लागि संस्थानको समृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सांस्कृतिक संस्थान सञ्चालन समितिका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारीले संस्थानको समृद्धिका लागि पुरानो सम्झौता बाधक भएको बताए । ‘संस्थानको समृद्धिका लागि सी. एम. ट्रेड्रिसँगको सम्झौता भंग हुनु जरुरी थियो’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘संस्थानमा अरु पनि केही समस्या छन् । हामी एक एक गर्दै समाधानका लागि अघि बढेका छौं ।’